Toetra Ràja Tano ny hazo
24 avrily 2017
Ny tany? Velona eo amboniny, maty ao ambaniny. Ary raha handeha hifindra monina ny Malagasy iray dia tsofin-drano : "Tsy ho tampohin-tany". Santionany amin'ny fifamatoran'ny olombelona sy ny tany izany. Tsy misaraka amin'ny tany ny olombelona. Manana ny fijeriny koa ny poety. Marihina isaky ny 22 avrily ny andro maneran-tany ho an’ny tany. Efa tamin’ny 1970, tao anatin’ny rivotry ny fandrosoana malaky, nahatsapana ny tsindry nampizakana ny tontolo iainana, no voalaza fa tandindonin-doza ny tany ka nankalazana voalohany an’io andro io ry zareo tany Etazonia. Fa ny taona 2009 kosa ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana vao nanokana ny 22 avrily ho andro fanamarihana ny Tany mamelona. Miova isan-taona ny lohahevitra voizina ka ny "Tontolo iainana sy ny fanabeazana eo anoloan’ny fiovaovan’ny toetrandro” no lohadinika amin’ity taona 2017 ity. Mampangotika sy mampihetsi-po ny zava-mitranga etsy sy eroa indrindra eto Madagasikara. Manan-kambara amin’izany ny tsirairay.
Miarahaba anao Toetra Ràja ary misaotra anao namaly hatrany ny antso. Aompana amin’ny resaka tany ny tafatafantsika anio. Inona no mety ho tonga ao an-tsaina raha vao miresaka tany isika ?
Miarahaba ny www.lakroa.mg sy ireo mitsidika ny tranonkala.
Tsy toy ny narahina ara-bakiteny tokoa ve ilay hoe olombelona mpanjakan’ny tany?
Mba asio fanazavana hoe ilay "AZO" izay.
Tsy ny Malagasy rehetra anefa no afaka mametraka lova ho an’ny zanaka aman-jafy satria misy tompon-tany tsy tompon’ny tany eto.
Tsy ny tany ihany angamba.
Azo lazaina fa mbola malalaka anefa i Madagasikara!
Marihina fa misy tany tsy voakolokolo sy karakaina kanefa mbola ifikiran’ny olona ihany.
Amin’ny alalan’izay fanontanian’ny vahinintsika izay no ametrahana veloma finaritra ho antsika mpanaraka ity tapatapakahitra ity. Natao ho an’ny rehetra ny fanontaniana.